Afar bilood ayay wadanka joogtaa, tababar ayayna hospitaalka ka bilowday - iftineducation.com
Afar bilood ayay wadanka joogtaa, tababar ayayna hospitaalka ka bilowday
aadan21 / February 15, 2016
iftineducation.com – Gabadha lagu magacaabo Ilham Mohamed Moallin waxay Sweden soo gashay bishii September ee sanadkii tagay, iyadoo mangalyo doon ah. Waxay cabsi ka qabtay in ay ku adkaato in ay shaqo hesho ama aan waxbrashadeeda loo aqoonsado balse nasiib wanaagsan dhowr bilood gudahood ayay ku heshay fursad muhiim ah.
Ilham oo 27-sano jir ah ayaa waxay wax ku baratay wadanka Masar oo ay 6-sano oo kalkaaliye caafimaad ah ay baratay. Bishii December ayay tababar ka bilowday hospitaalka Höglandssjukhuset ee ku yaala Eksjö halkaasoo ay ka filayso in ay shaqo ka hesho isla markaana ay ku jidho xirfadeedii caafimaadka.
Inkastoo culeyska ugu badan ee Ilham soo foodsaaray uu ahaa dhinaca luuqada ayay hadda sheegtay in shaqada ay u sahlayso in ay luuqada barato. Waxay sheegtay in bilowgii hore ay ku dhexjidhay dadka af-soomaaliga iyo carabiga ku hadla oo keliya balse hada ay bilowday isdhexgalka Swedishka.
Ilham ayaa dadaal fiican samaysay in afar bilood gudahood ay tababar ka hesho hospitaalka.